Samsung waxay aadeysaa safka iPhone 6s si loo iibiyo S6 Edge | Wararka IPhone
Samsung waxay aadeysaa safka iPhone 6s si loo iibiyo Galaxy S6 Edge
Wax walba miyey ku baxaan suuqgeynta? Marka la eego isboortiga, su'aashu waxay noqon doontaa, Wax walba ma mudan yihiin in la guuleysto? Jawaabta dad badan ayaa ah maya, sida aad ugu guuleysato sidoo kale waa muhiim. Taasi waa dooddii aan shalay la yeeshay saaxiibkey markaan ogaanay taas Samsung ayaa saf gashay halkaas oo ay sugayeen inay ka iibsadaan iPhone 6s / Plus si ay isugu dayaan iibiso Samsung Galaxy S6 Edge iyo Edge Plus kuwa jooga.
Waan fahansanahay inay dhamaan ka tirsantahay Suuqgeynta Samsung. Tan waxaa sii dheer xayeysiisyada meesha Apple calaamadda Kuuriya ay "ku jajabto" markasta oo ay fursad hesho. Xayaysiiska ugu dambeeyay waa midka sheegaya in «IPhone maahan ee waa Galaxy»Iyadoo la tixraacayo ololaha Applehaddii uusan ahayn iPhone, ma aha iPhone»Iyo meesha aan ku aragno in terminaalka Samsung lagu soo oogi karo fiilooyin la'aan, waa wax aniga shaqsiyan igu maaweeliya maxaa yeelay amarka wireless-ka ee maanta ayaa xaddidaya dhaqdhaqaaqa aaladda eber inta aan ka amreyno.
Shaqaalaha Samsung ayaa dhabarka ku sitay calaamad aan ku akhrin karno «cuncunka in la beddelo ayaa weynaaday»(Cuncunka beddelka ayaa sii weynaaday), weedh laga yaabo inay la socoto ilbidhiqsiyo, maaddaama aynu wada ognahay taas cuncun kasta waa dhib waana taas waxa ay umuuqato in Samsung ay shalay ku sameysay safafka Apple.
Saaxiibkay dooda wuxuu yiri oo ilaaliyay in «Hoos uma dhici kartid«, Wax aanan markii hore ku heshiin. Laakiin fekerka labaad, shirkad kastaa waa inay muujisaa oo weyneeysaa wanaaggeeda gaarka ah si dadka isticmaala ay u doortaan wax soo saarkooda. Taasi waa waxa run ahaantii ka dhigaya shirkad weyn. Oo aad safka tartanka si laba jeer iibsoSidii aan idhi, nolosha sida cayaaraha, muhiim maahan oo keliya inaad guuleysato, laakiin sida loo guuleysto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Android » Samsung waxay aadeysaa safka iPhone 6s si loo iibiyo Galaxy S6 Edge
Waxaan u arkaa inay tahay mid xanuun badan Samsung, maadaama dukaankooda aysan tagin ama ehelada shaqaalahooda ay aadaan kuwa ay runtii soo jiitaan, iyagoo dhacaya iib kasta oo suurtagal ah sida gorgorrada, waxa ixtiraamka mudan ayaa ah in shaqaale Apple uusan soo bixin oo iyaga u tuuro ipadazos ...
Sawirka booska Joselito Lopez dijo
Saaxiib deggan, ha u tagin inaad waxyeello u geysato beerka geesinimo badan, ujeeddada Samsung ma ahan inay iibiso, laakiin waa inaad fiiro gaar ah u leedahay bogagga sidan oo kale ah iyo xanaaqa dadka adiga oo kale ah. Dhinacyadeeda Galaxy S6 waxay ku guuleysteen dhanka hal-abuurnimada iyo tayada ugu yar ee Samsung ay rabto waa qaraabada shaqaalaheeda inay iibsadaan
Jawaab Joselito Lopez
Labada Samsung Galaxy S6 Edge iyo Edge Plus labadaba waxay suuqa ku jireen dhowr maalmood, waxaan u maleynayaa in iibyo yar ay helayaan iyaga oo ku sameynaya paripe-ka albaabbada dukaanka tufaaxa. Oo haddii aan ku darno in dhammaan dadkaas ay u maleynayaan inay rajeynayaan inay qanciyaan ay qaadan doonaan saacado ay rabaan inay galaan dukaanka si ay uga saaraan qaar ka mid ah taleefannadooda iPhones 6s. Ma ii sheegi doontaa in ujeeddadaadu ahayd inaad wax iibiso? kaalay, waan hubaa isku dayga ah inay ka iibiyaan taleefannadooda gacanta dadkaas waxba haba yaraatee, ujeedkoodu wuxuu ahaa sida saxda ee ay maareeyeen ... inay ka muuqdaan sawirka. Si loo gaaro wax ka badan ama ka yar wixii aan ku aragno inaan halkan ku hayno, mid dhexdhexaad ah sida boggan, kana hadlaya iyaga dhinaca kale ee meeraha. Galabtaan waxaan wacay waaxda saxaafada ee Samsung waxaanan meel mariyay biilka adeegyada la bixiyo. Sababtoo ah taasi waa waxa kaliya ee ay doonayeen inay ka helaan xayeysiinta adduunka oo dhan lacag la’aan. WAAN JECLAHAY INTERNETKA
Salaan MrM. Miyaad ogaatay in maqaalka aan ku xusayo suuqgeyn iyo isboorti isboorti?
PS: "iibinta" maahan macaamil ganacsi oo kaliya.
Dabcan, haddii aan ku qanacsanahay in fikraddu aysan ahayn in si dhab ah Samsung looga iibiyo dadka saacadaha ku qaadan lahaa waddada iphone ... intaas oo dhan waa 100% suuq geyn.
Waxaa jirta oraah aan ka maqlay dad badan oo xirfadlayaal ah aadna waxtar u leh; Dhib malahan inay si xun uhadlaan ama sifiican uhadlaan, muhiimadu waxay tahay inay hadlaan… halkaas ayaan kaga tagayaa, salaan.
Caqli badan ma lahan sida istiraatiijiyad suuqgeyn ah oo lagu bixiyo kafee ama soodhada haddii ay kulushahay, taas oo si ka wanaagsan uga hadli doonta dadka samsug marka loo eego tufaaxa taas oo ka dhigeysa iyaga oo qabow ama kuleyl ku sugaya sida dameerrada albaabka; Sikastaba, aduunka murugo badanaa, ma arko qof saf ugu jira caawinta sanka sanka, imaatinka qaxootiga ama waxkastoo nolosha ku lumin lahaa safka ama aniga oo kale qoraya wax aan jirin ...
Mid kastaa wuxuu sameyn doonaa wixii isaga ugu wanaagsan iyo / ama ku habboon noloshiisa, taasna waxaad u leedahay hal ...
Macboy waa laga gooyay
Ku jawaab dsa
Hahaha, waxaan ka baqayaa in dadka Apple ay dhihi doonaan ma iibin IPhone-kooda maxaa yeelay dadka Samsung waxay aadeen alaabtooda banaanka dukaankooda, iibka Galaxy S6 Edge waa bahalnimo, ha u maleynin in dadka ee Samsung waxay u sameeyaan inay iibiyaan laakiin si boggaga noocan oo kale ahi u xanaaqsan yihiin, xayndaabka ayay ku gaadheen!
Samsung kaliya keria k xitaa boggaga bogagga u gaarka ah iphone waa la xusi doonaa. Xeeladaha suuqgeynta
Kani waa Mashiinka cusub ee Apple Taptic ee hoos yimaada X-Rays